February 10, 2020 - Myitter
” Coronavirus Outbreakနောက်ဆုံးအခြေအနေ ”….
February 10, 2020 Myitter 0
အရေးကြီးသတင်း။ ယနေ့ ညနေ (10-2-2020) 7:45 PM Updates Coronavirus Outbreakနောက်ဆုံးအခြေအနေ။ -ရောဂါပျိုးရက်သည်ယခင်က(3-14) ရက်လို့ယူဆထားရာကနောက်ဆုံးတွေ့ ရှိချက်တစ်ခုက(0-24)ရက်ပါတဲ့။ ပိုကူးစက်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့။ China NHC,Dadax,Dmail Credit Aung Tun unicode version အရေးကွီးသတငျး။ ယနေ့ ညနေ (10-2-2020) 7:45 […]
အီဂျစ်နိုင်ငံသား တစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ့် ”ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဘီလ်ဂိတ်၏ သမီး ”….
ဘေလ်ဂိတ်၏သမီး ဂျနီဖာက အီဂျစ် နိုင်ငံသား သန်းကြွယ်သူဌေးနာမည်ကျော် မြင်းစီးသမား နေယယ်လ်နက်ဆာနှင့် စေ့ စပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အသက် ၂၃ နှစ်အ ရွယ် ဂျနီဖာသည် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးအ ဖြစ် နှစ်အတန်ကြာသတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး လက်ရှိတွင် တတိယအချမ်းသာဆုံးဖြစ် သည့် ဘေလ်ဂိတ်၏သမီးကြီးဖြစ်သည်။ လေးနှစ်ကြာတွဲခဲ့သည့်ချစ်သူနှင့်လက် ထပ်တော့မည့်အကြောင်းကို ၎င်းက အင် […]
” ကံညံ့တော့ မယ်ဆိုရင် ဒီလိုသိရပါတယ် ”
တစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ်ဆိုရင် ၁။ အရင်ကထက်ပိုပြီး ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟပိုကြီးလာ တတ်တယ်ပါတယ် ။ အရင်ကထက် ထစ်ခနဲရှိစိတ်တိုနေပြီဆို … သတိထားဗျ ..ကံညံ့တော့မယ်လို့ပြတာပဲ… ၂။ မကောင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ကောင်းတယ်လို့မြင်လာ တတ်တယ်… ဥပမာဗျာ ..အရင်ကအရက်သိပ်မသောက်ဖြစ်ဘူးဆိုပါတော့… ကံညံ့တော့မယ်ဆို ..အကြောင်းပြချက်မရှိ အရက်ခဏခဏ သောက်ဖြစ်တာမျိုး… မကောင်းတဲ့ […]
Terminal 21 Korat ဖြစ်စဉ်တွင် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားကြသူများအတွက် ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ဆုတောင်းပွဲကျင်းပ
Terminal 21 Korat ဖြစ်စဉ်တွင် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားကြသူများအတွက် ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ဆုတောင်းပွဲကျင်းပ နခွန်ရတ်ချစီမာပြည်နယ် ခိုရတ်မြို့မှာရှိတဲ့ ” ယမိုးအနုစဝလီ ” ကျောက်တိုင်ရင်ပြင်တွင် ထောင်သောင်းချီသောပြည်သူများနှင့် ဆရာတော် သံဃာတော်တို့မှ လူသတ်သမားလက်ချက်ကြောင့် ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြသော သူများအတွက် ရည်စူး၍ ပန်းဆီမီးအမွှေးတိုင် တို့ကိုထွန်းညှိ၍ ကောင်းရာသုဂတိ လားရန်ဆုတောင်းမ္တောပို့သကြ […]
” ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ မှ ၁၃ အတွင်း အအေးပိုလာနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသများ ” ….
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့မှ ၁၇ရက်နေ့အတွင်းမှာတော့ အထက်ဖော်ပြပါ ဒေသများအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင် ပဲခူးတိုင်း ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ဒေသများကိုပါ ဖြစ်မြဲအပူချိန်များထက် လျော့နည်းပြီး ဆောင်းလေညှင်းက အအေးပိုစေနိုင်ပါတယ် အအေးလှိုင်းမဟုတ်ပါ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁၁ရက်နေ့မှ ၁၃ရက်နေ့အတွင်း ကချင်ပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မန္တလေးတိုင်း မကွေးတိုင်း […]
10.2.2020 နေ့ မအူပင်စက်မှူ့ဇုံအတွင်း ဖျားနာ တရုပ်လူမျိုးများမှာ တရုပ်ပြည်ကပြန်လာကြတဲ့လူများဖြစ်ပြီ ….
10.2.2020 နေ့ မအူပင်စက်မှူ့ဇုံအတွင်း ဖျားနာ တရုပ်လူမျိုးများမှာ တရုပ်ပြည်ကပြန်လာကြတဲ့လူများဖြစ်ပြီး ပြန်လာထဲကနေစဉ် အဖျားတက်တက်နေတာကြောင့် (သံသယ)တော့ရှိပါတယ် စစ်ဆေးမှူ့တွေလုပ်မယ် လို့ပြောပါတယ် ၄င် တရုပ်လူမျိုးများကို ယနေ့ဆေးရုံတင်မည်ပြောသဖြင့် ” ကျွန်တော်ကတော့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုသိပ်နားမလည်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အပါအဝင်မအူပင်မြို့သားတွေအားလုံးက မအူပင်ဆေးရုံမှာထားမှာကိုလက်မခံပါဘူး နည်ပညာမြင့်မားမှူ့မရှိလို့ နည်ပညာပိုကောင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုပို့ပေးစေခြင်ပါတယ် လိုအပ်လို့အကူအညီလိုရင် ကရုဏာက စိတ်ချရတဲ့ဝတ်စုံရယ်ကားရယ်ကို […]
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ထွန်းတောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကြယ်ပွင့်လေး ….
Zawgyi ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ထွန်းတောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကြယ်ပွင့်လေး အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေ ပိုပြီး သတိထားခြင်းခံထားရတဲ့လူငယ်အဆိုတော်ကောင်မလေးမာသထူးဝါးက ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသူလေးတစ်ဦးပါ။ ဂီတကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိဘနှစ်ပါးက မွေးဖွားလာသူမြဝတီ၊မဲစောက်မှာမွေးဖွားခဲ့သူ ကရင်တိုင်းရင်းသူလေးမာသထူးဝါးကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းကဂီတသံစဉ်တွေ နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့သူလေးပါ။ ဖခင်ရဲ့အနုပညာသွေးအပြည့်ပါတဲ့သူမဟာသီချင်းတွေ ဆိုနေရရင်ကိုပျော်နေတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသီချင်းစဆိုခဲ့တဲ့အချိန်က သူငယ် တန်းကတည်းကပါတဲ့။ “သမီး […]
” မို့မို့မြင့်အောင်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံးကိုလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ ” လမင်းကဗျာ …
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေထဲမှာ ဇာတ်ပိုကဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး လမင်းကဗျာကတော့ ဒီနေ့မှာ ညီမလေးမို့မို့မြင့်အောင်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံးကို လှူဒါန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ လမင်းကဗျာဟာ အလှူအတန်းတွေကို သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာနဲ့ ဖြူစင်မွန်မြတ်စွာအမြဲလိုလို လှူဒါန်းပေးလေ့ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း နတ်မောက်မြို့ ထန်းပင်မျောင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ ညီမငယ်လေးမို့မို့မြင့်အောင်တစ်ယောက် လိုအပ်နေတဲ့ မျက်လုံးတုတစ်လုံးကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပါ။ အခုလို […]
အမေရိကန် CDC အကူအညီဖြင့် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်စစ်ဆေးနိုင်တော့မည် ….
ယခုလကုန်ပိုင်းကစပြီး စတင်စစ်ဆေးနိုင်တော့မှာပါ။ အမေရိကန် CDC ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ကာ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ Trainingများပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ယခုလကုန်ပိုင်းလောက်စလို့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သံသယလူနာ‌တွေမှာ ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ […]
Teminal 21 မှာပိတျမိနတေဲ့ လူပေါငျးမြားစှာရဲ့အသကျကိုကယျတငျခဲ့တဲ့ နောကျကှယျကရဲရဲရငျ့ရငျ့အနီရောငျသူရဲကောငျးလုံခွုံရေးဝနျထမျး ( သို့ ) Hero Of Terminal 21
Teminal 21 မှာပိတျမိနတေဲ့ လူပေါငျးမြားစှာရဲ့အသကျကိုကယျတငျခဲ့တဲ့ နောကျကှယျကရဲရဲရငျ့ရငျ့အနီရောငျသူရဲကောငျးလုံခွုံရေးဝနျထမျး ( သို့ ) Hero Of Terminal 21 ဒီဆောငျးပါးကိုရေးနရေငျးနဲ့ကွကျသီးမြားပငျထခဲ့မိပါသညျ.. 😥 ၁၃၈၁ ခုနှဈ တဈပို့တှဲလပွညျ့နေ့ ၊ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဖဖေဝါရီလ ၈ ရကျနေ့ ဟာ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ […]